March 31, 2010 na 11:53 na
Ndewo, anyị na-eji plugin na anyị na saịtị na nwere nnọọ obi ụtọ na-arụpụta. Otú ọ dị, anyị chọrọ iji na-enye anyị ọbịa ohere ịsụgharị na ele saịtị na Scots asụsụ na-eche ma nke a bụ na o kwere omume na ihe bụ isi ike na-agbakwunye mmezi asụsụ?
Enyemaka ọ bụla / nzaghachi na-akacha amasị ya. Thanks for the great plugin 🙂
March 31, 2010 na 1:40 obi
Ị dị nnọọ mkpa ka ịgbakwunye otu ahịrị ndị na-asụ asụsụ n'usoro na constants file, jisie ike
June 18, 2010 na 3:38 obi
Daalụ maka Ama na ndo maka mbubreyo reply.
M ga-enye ya a laa na ka ị mara otú m nwetara on. Daalụ ọzọ, still an excellent plugin 😉
April 1, 2010 na 4:36 obi
Very good 🙂 One more function, nwere ike I tinye n'ime utu aha, ụfọdụ identifers asụsụ… i Na-amarakwa… n'ihi na google webmastertools egosi a ozi:
Efu na aha tags 0
Oyiri aha tags 1,139
Long aha tags 0
Short aha tags 0
Non-ihe ọmụma aha tags 0
Oyiri aha mkpado bụ obere nsogbu, but problem 🙂
April 16, 2010 na 6:13 obi
Nwere ike nchịkwa zaghachi m comment? 🙂
April 16, 2010 na 7:23 obi
Aha mkpado ma meta mkpado na-kpo, ọ bụ ezie na ọ bụghị ndị nwere frontend interface, a a na-arụ ọrụ na. Maka ugbu a – a ngwa ngwa ụzọ ka a ofu bụ itinye ederede ị na-eji na utu aha n'ebe ọ bụla a post (ọbụna a onwe onye) ka translation engine idozi nke a.
Daniel Ezi na-ekwu,
April 4, 2010 na 4:54 obi
Ihe niile na-arụ ọrụ ezi na ọhụrụ version (v.5).
Ka m na-atụ aro nsụgharị maka Urdu na Punjabi ? M nwere zaghachirinụ na Pakistan na ha rịọrọ ndị. Kasị na Pakistan nakwa dị ka ụfọdụ na India na-ekwu okwu abụọ ndị a na-asụ asụsụ.
Daalụ; na-ahụ ihe ọma n'ọrụ!